Taliyihii Ciidamada Asluubta oo lagu xukumay xabsi daa’in | Warfaafiye
Warfaafiye Somali News	Taliyihii Ciidamada Asluubta oo lagu xukumay xabsi daa’in
Maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun ah xabsi daa’in ku riday Taliyihii hore ee ciidamada Asluubta S/Guuto Cabdi Maxamed Ismaaciil (Indha Buur) iyo Agaasimihii Garsoorka Maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cabdi Axmed (Xasan Liibiya) oo Shan sano xarig ah, dhameysan doona, kadib markii lagu soo eedeeyay iney galeen qiyaano qaran.
Taliyihii hore ee ciidamada asluubta Cabdi Maxamed Ismaacil ayaa lagu eedeeyay inuu sameeyay Qaran dumis iyo qiyaano isagoo darajadii Qaranimada loo igmaday u adeegsaday inuu sii daayo 14 qof oo ka tirsan Al-Shabaab, oo maxkamadda ciidamada qalabka sida ku riday xukuno kala duwan, isla markaana xubnaha uu sii daayay siiyay darajo ciidan iyo aqoonsiga ciidamada Asluubta.
Sidoo kale Agaasimihii garsoorka maxkamadda ciidamada Xasan Liibiya ayaa isna lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa falkaasi isagoo ka gacan siiyay taliyihii hore siidaynta xubno ka tirsan Al-shabaab, kuwaasoo xabsiga dhexe ku xernaa, waxaana lagu xukumay Xasan Liibiya Shan sano oo xarig ciidan ah.
Taliyihii ciidamada Asluubta ee la xukumay
Guddoomiyaha maxakamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed Liibaan Cabdi Yarrow ayaa ku dhawaaqay go’aanka ay maxkamada ka gaartay.
Waxay sidoo kale Maxkamadda xukuntay in Muuse Ciise Nuur oo ahaa nin horay Maxkamada xukuntay, balse ay sii daayeen saraakiishan la xukumay, iyagoo siiyay darajo ciidan oo dhame ah laga qaatay aqoonsigiisa, isla markaana uu dhameysanayo xukunkii horay lagu riday oo ahaa 8-sano, isagoo tilmaamay in xukunkiisa uu u furan yahay rafcaan.
Waa xukunkii ugu horeeyay ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ku rido saraakiil sare oo ka tirsan Dowladda Soomaaliya, iyadoo tallaabada uu horey u qaaday Taliyihii ciidamada Asluubta ay dhalisay shaki badan iyo cabsi laga qabay in Shabaab ku dhex milmaan Dowladda.